Izifo Zezinsana | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Isigaba Izifo Zezinsana
Kungani amahansi egula: uhlu lwezifo nezindlela zokwelapha
Izifo ze-geese yinkinga enzima kakhulu kubalimi. Izifo ezehlukene zithinta kakhulu inani lezinsikazi emhlambini wezinkomo, futhi zibangele kokubili ukulimala kwempahla nokuhleleka. Bonke abalimi abanolwazi bayazi ukuthi kungcono ukuvimbela isifo kunokubala ukulahlekelwa ngenxa yalokho. Uma kuqhathaniswa nezinye izinkukhu, i-goose iyakwazi ukuthola izifo ezihlukahlukene.
Izifo zamahansi: ezithathelwanayo futhi ezingenasifo
Njengazo zonke izilwane, izinkukhu nazo ziyakwazi ukugula nezifo. Izifo zezinsizi zingenye yezinkinga ezinkulu umphathi obhekene nazo. Zithinta kakhulu isimo sezinyoni futhi zingathinteli inani lenkomo. Njengoba lezi zinyoni zithinteka kakhulu kumagciwane, kubalulekile ukwazi ukuthi iziphi izifo ababhekana nazo, ukuthi iziphi izimpawu zabo nokuthi yiziphi ukwelashwa okungase zidingeke.
Indlela yokuphatha isifo sohudo ngoose
Emapulazini amaningi angasese abahlobo bamazwe. Udinga ukwazi ukuthi le nyoni iyakwazi ukuthola izifo ezihlukahlukene ngokunakekelwa okungalungile. Cabanga ngenye yezinto ezivame kakhulu - isifo sohudo, esidinga ukunakekelwa kumuntu, ngoba kuvame ukuwuphawu lwesifo esibi kakhulu. Kungani isifo sohudo saseGeese, njengezo zonke izidalwa eziphilayo, zidinga ukunakekelwa nokugcinwa kahle.